Gaza sy Sderot: Mila fiaingana vaovao isika rehefa vita ny ady · Global Voices teny Malagasy
Gaza sy Sderot: Mila fiaingana vaovao isika rehefa vita ny ady
Voadika ny 03 Janoary 2009 11:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, македонски, Italiano, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, English
Kilometatra vitsy monja ny mampisaraka ny tanànan'i Gaza sy ny tanàna Isiraeliana ao Sderot. Herintaona izay, na dia sahirana tanteraka aza ny mponin'i Gaza noho ny fahirano Isiraeliana, ary voatifitry ny balatafondro matetika avy any an-tehezantanin'i Gaza aza i Sderot, dia nisy lehilahy roa avy amin'ny andaniny sy ny ankilany tsirairay avy nanomboka namahana bolongana iray. Hatramin'izany fotoana izany no nifampizaran'ny roa tonta izay niainany andavanandro sy ny fomba fijeriny mamndritra ny toe-draharaha ka tafiditra amin'izany ny tamin'ny herinandro lasa.
Life must go in Gaza and Sderot dia bolongana iraisan'i “Peace Man” (Lehilahin'ny Fandriampahalemana) avy any Gaza sy “Hope Man” (Lehilahin'ny Fanantenana) avy any Sderot. Nampifandraisin'i Danny Gal, Miasa amina Fikambanana tsy miankina (ONG) iray misahana ny fiantraikan'ny ady ao Azia Andrefana, izy mirahalahy ireto ka nanomboka namaham-bolongana hatramin'ny Janoary 2008:
This blog is written by 2 friends. … There is ongoing violence between Israel and Gaza which has intensified greatly since October 2000. Many have been killed and many have been injured. The media coverage on both sides has been extremely biased. Our Blog is written by 2 real people living and communicating on both sides of the border.
Mpinamana 2 no manoratra amin'ity bolongana ity. … Mitohy ny herisetra eo amin'Isiraely sy Gaza izay nihanahery vaika hatramin'ny Oktobra 2000. Maro ny maty sy maratra. Mitongilana avokoa ny tati-baovao ataon'ny haino aman-jerin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny Bolonganay kosa dia soratan'olona roa tena misy sy mifampiserasera avy amin'ny roa tonta.
Tamin'ny lahatsoratra farany no nilazan'i Peace Man :
Mihoatra ny 300 ny maty ary 200 no tsy hita popoka ary 160 eo ho eo ny maratra mafy nandritra ny roa andro nitifirana ny tehezan-tanin'i Gaza. Noravan'Isiraely avokoa ny paositry ny polisy sy ny tranom-panjakana rehetra. Polisy sy sivily ary zaza no maty nandritra ity fanafihana ity.
Sarotra ny mitantara izay mitranga eto Gaza , voina mampihoron-koditra, fa tsy manaaka na sivily na miaramila na zaza ny voromby mpiady.
Amin'izao fotoana izao dia manodidina hiomana hanafika an'i Gaza ny fiara mifono vy
Miangavy ny vondrona iraisam-pirenena aho hampitsahatra izay mitranga eto Gaza amin'izao fotoana izao ary manantena aho fa hiverina indray ny fampitsaharana ny fifampitifirana ka haifika lavitra any ny herisetra
Fa miantso herisetra mahery kokoa ny herisetra
Hilaza aminareo ny vaovao farany hatrany aho
Nampiseho ny fomba fijeriny i Hope Man :
Maro ny olona nandao an'i Sderot ary tombanako fa latsaky ny 50%n'ny mponina ao aminy sisa no mijanona. Vitsy ny olona mieziezy eny an-dalambe ary tsy ahitana zaza mihitsy.
Fahadisoana lehibe ny ady, na izany aza dia tsy isalasalana fa maro amin'ny olona eto Isiraely no manohana ny ady. Zavamisy mampihoron-koditra ny fanjerana baomba isan'andro nandritra ny valo taona teto Sderot. Maro tamin'ny olona eto amin'ny faritra misy anay nandritra ny taona vitsivitsy izay lasa nifindra monina tanteraka. Tsy mety sady sady maneho tsy fahamatorana ny fitaizana zaza amina toe-draharaha tahaka izany.
Ny fahatsapana manjaka amin'ny fiaraha-monina Isiraeliana dia hoe tsy misy safidy afa-tsy ny manafika an'i Gaza mba hampitsahatra hatreo ny fandefasana baomba. Izay no hataon'olombelona rehefa miatrika toe-draharaha tahaka izao.
Raha milaza izany aho, dia mieritreritra manokana fa fahadisoana azo nidifiana ity toe-javatra ity. Nitsahatra tanteraka ny fifampitifirana nandritra ny 5 volana. Samy nandany ny androny hiomana amin'ity ady ity tamin'ny fanangonana fitaovam-piadiana sy fanomanana tetikady ny roa tonta raha tokony ho nahay nanararaotra hanao fifanarahana maharitra. Tsy nisy fiezahana matotra hifampiresaka. Nitohy ny fahiranaon'Isiraely sy ny fanangonana fitaovam-piadiana nataon'ny Hamas. Fampitsaharana fifampitifirana no natao hiomanana amin'ny dingana mahatsiravina manaraka izay iainantsika amin'izao fotoana izao.
Kivy tanteraka aho amin'izao fotoana izao. Ny ahiako dia ho avy ny fanafihana avy ety an-tanety ka hampitombo bebe kokoa ny hifirify. Angamba hisy ihany ny fifanarahana. Manantena aho mba ho avy faingana izany, sangy manahy aho fa tsy izany no hitranga.
Mifampiresaka isan'andro izaho sy Hope Man. Mifampahery mandrakariva ary samy miahy amin'ny fiainan'ny andaniny avy. Manana fifandraisna amin'ny hafa any Gaza aho izay mifampizara sy mifampihaino ny manjo anay tsirairay avy. Samy matahotra sy samy mangirifiry ny any amin'ny andaniny sy ny aty amin'ny ankilany
Mifanapatapak'ahitra mandrakariva amin'ny namana azy Gaza no ataoko sy ny hafa. Miezaka izahay hampivelatra sy hampiroborobo izao fifampiresahana izao eo amin'ny andaniny syny ankilany. Rehefa tapitra ny ady dia hitady lalana izahay hiaraha-miasa sy handravona ny toe-draharaha. Kilometatra maromaro ihany no manelanelana ary tsy hiova mandrakizay izany elanelana izany. Tena zava-dehibe tokoa izany fampivelarana ny fifampiresahana sy manangana fifampitokisana eo amin'ireo manetry tena hifampiresaka izany. Mifampizara tantara, tahotra ary fanantenana. Mila fiaingana vaovao isika rehefa vita ny ady. Atombohy dieny izao ary ny famafazana ny voam-[panahy maha-olona] sy fifampitokisana izany.
Nanatontosa andian-dahatsary fohy antsoina hoe Gaza Sderot ny televizionan-kolontsaina Germano-Frantsay ARTE nalain'ny ekipa Isiraeliana sy Palestiniana avy amin'ny fiainana andavanandro tao anatin'ny roa volana, ary anarahana olona enina avy any Gaza sy olona enina avy any Sderot. azonao jerena eto ny vokatr'izany.
Sarin'i: Wikimedia Commons
te hahaheno vaovao momba an i MADAGASIKARA zaho.
11 Febroary 2009, 20:20